धरान उप–महानगरमा टिकटको लागि मेयरको ताँतीः ताप्के नताती बिँड तात्यो - Jhilko
सरकारले मंसिर १४ गते उप–निर्वाचन तोके लगत्तै धरान उप–महानगरमा निर्वाचनको माहोल तातेको छ । धरानमा विँड (मेयरका आकांक्षी) खुबै तातेका छन् तर ताप्के (निर्वाचनका टिकट बाँड्ने पार्टी केन्द्र) भने तातेको आजका मितिसम्म देखिन्न । धरानमा जनाधार भएका सबै पार्टीको यहि हालत छ ।
विगत लामो समयदेखि बामपन्थी मतदाताको गणितमा गढ मानिएको धरानमा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा बने पछि सहज जित हुने हिसाव कितावमा नेकपा पङितको आकर्षण हुनु स्वभाविकै हो । यसकारण नेकपाको नेताहरु टिकट हात पार्न कम्मर कसेर लागेका हुन । यता प्रतिपक्षि नेपाली कांग्रेसका उमेद्वारहरु तिलक राई, किशोर राई र सुजेन्द्र तामाङ चर्चामा छन् । टिकट बाँट्ने कांग्रेसको सानेपा पनि सुनसान छ । नेकपामा भने आधादर्जन बढीले हात उठाएकाछन् । मेयर तारा सुब्वाको निधन पछि खाली रहेको रिक्त पदमा निर्वाचन हुन लागेको हो ।
नेकपा एकीकरण भईसके पनि यो निर्वाचनमा साविक एमाले र साविक माओवादी मोर्चा जस्तो मात्रै देखिएका छन् । दूवै समुहको छुट्टाछट्टै प्रस्तावित उम्मेद्वारहरुको दावी छ । गएको निर्वाचनमा साविक एमालेले एक्लैले मेयर उप–मेयरसहित बहुमत वडाध्यक्ष जितेकोले साविक एमाले समूहबाटै उम्मेद्वार हुनु पर्ने दावी रटिरहेका छन् । यता साविक एमालेले संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा सुनसरी एक नं निर्वाचन क्षेत्रको तिन सिट मध्ये सबै सिट माओवादीको भागबाट उछिट्टिएकोले एकताको मर्म र भाव स्थापित गर्न मेयरको उम्मेदवारी माओवादीको पोल्टामा पर्नु पर्ने जिकिर गरेका छन् ।
साविक एमालेबाट जिल्ला कमिटी सदस्य प्रकाश राई, पदम इस्बो (लिम्बू), प्रदेश सदस्य विजय राई, नगर अध्यक्ष नारायण सुवेदीले मौखिक निवेदन प्रस्ताव गरेका छन् । साविक माओवादीबाट प्रदेश सदस्य अइन्द्रविक्रम बेघा र जिल्ला सदस्य फोक्वाहाङ सुब्बाले बोली फुटाएका छन् । उता गत निर्वाचनमा पराजित अइन्द्रविक्रम बेघाले गत निर्वाचनमा घाइते भएकोले प्राथमिकता पाउनु पर्ने स्वर खापेका छन् । चोत्लुङले नगरको दलीय संयन्त्रमा बसेर अनुभव संगालेकोले कार्यकर्ताको उनीप्रति सहानुभुती रहेको दावी गरेका छन् ।
साविक एमाले भित्र संगठानिक लामो समय पार्टी नेतृत्वमा रहेको तर अवसरवाट बन्चित प्रकाश राईको पक्षमा स्थानिय नेता कार्यकर्ता देखिएको दावी छ । नेकपाका प्रदेस सदस्य समेत रहेका विजय राई आफुलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा सभापतिको अनुभव समेत रहेको भन्दै टिकट पाउनु पर्ने दावी गरिरहेको छन् ।
यता बजारमा भने नेकपा प्रदेश सदस्य तथा लामो समय धरान मै राजनीति गरेका मुक्साम हाङ मेन्याङबो मुकेश, जिल्ला सचिव रमेश बस्नेत, पूर्व मेयर मनोजकुमार मेन्याङबो, पूर्व सांसद किरणकुमार राईको समेत चर्चा व्यापक छ । तर उनीहरु आफैले दाबी गरेका छैनन् । तर पार्टी केन्द्रिय तहले उप–महानगरको उम्मेदवार तय गर्ने तथा धरानका मुख्य नेतृत्वमा उनीहरु पर्ने हुनाले पार्टीले निर्णय गर्दा अर्कै परिदृश्य आउन पनि सक्छ ।
भोटको गणित :
स्थानिय तहको निर्वाचनमा एमालेको २१ हजार, नेपाली कांग्रेसको १६ हजार तथा माओवादी केन्द्रको ११ हजार मत निर्वाचन बही खातामा थियो । तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम (समाजवादी पार्टी नेपाल)ले चुनावी गठबन्धन गरेकोले उसको मत तथ्यांकमा यतिउति भनेर निकाल्न सकिन्न । पछिल्लो प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पनि कांग्रेससंग गठबन्धन गरेकोले पनि मत तथ्यांक एकीन छैन । तर, धरानमा संघीय समाजवादीको मताधार पनि उल्लेखयोग्य छ । संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चसम्बद्ध लिम्बुवान मञ्चको पनि केही मताधार छ । गत स्थानीय निर्वाचन पछि सर्दु, सेउती, खहरे र शेरामा धेरै पानी बगिसकेको छ । यसैले पनि अव हुने चुनावमा प्रतिस्पर्धा हुन सक्तैन भन्ने आधार छैन । कांग्रेस बाह्र वर्षपछि खोलो पनि फर्किन्छ भनेर आश लगाएर बसेको छ । गठबन्धन, अन्तरघात, प्रतिघात, उम्मेद्वारको छनोटले निर्वाचनलाई जहिल्यै प्रभाव पार्छ । यसर्थ यि चाकाचुली भन्दा पर गएर गणितकै आधारमा अहिल्यै फैसला गर्न सकिन्न ।
जनप्रतिनिधि चंगा हुन्, लट्टाई जनताको हातमा हुनु पर्छ : किरण राई
तपाईं भर्खरै नेकपा प्रवेश गर्नुभएको छ । टिकट लिन नभिडी हुँदैन भन्छन् । तपाईलाई देलान् त ?
हो मलाई भर्खरै आबद्ध गराउनु भएको छ । यो मेरो निजी मामिलाको कुरा होईन । धरानवासीको आवश्यक जनमत प्राप्त र जनभावनाको अधिकतम सम्बोधन गर्न कसलाई प्रतिनिधि बनाउँदा सम्भब हुन्छ भन्ने कुराको बिश्लेषण पार्टीले गर्ने हो । भिडेर टिकट प्राप्त गर्ने काम राजनैतिक प्रशासनिक कार्य संपादनका लागि बाधक हुन पनि सक्छ । जनमतका आधारमा टिकट दिँदामात्र उचित मुल्यांकन होला ।
धरानको मेयरमा तपाईंको नाम अलि बढी चर्चामा छ नि !
उप निर्वाचनको मिति सार्बजनिक गरिएसंगै धरानको रिक्त स्थान मेयरका लागि धरानवासी जनसमुदायमा उम्मेद्वार खोज्ने र रोज्ने प्रकृया अगाडी बढेको छ । म संविधान सभा निर्बाचन २०६४ मा धरानबाटै प्रतक्ष निर्बाचित भई प्रतक्ष नगरवासीसंग सहकार्य गरिसकेको हुनाले चुनाबको संदर्भमा मेरो नाम पनि स्वस्फूर्त चर्चा परिचर्चामा ल्याईन्छ । कुरा यति हो ।
तपाईं भर्खरै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रवेश गर्नुभएको छ । टिकट लिन नभिडी हुँदैन भन्छन् । तपाईलाई देलान् त ?
हो मलाई भर्खरै आबद्ध गराउनु भएको छ । यो मेरो निजी मामिलाको कुरा होईन । धरानवासीको आवश्यक जनमत प्राप्त र जनभावनाको अधिकतम संबोधन गर्न कस्लाई प्रतिनिधि बनाउँदा संभब हुन्छ भन्ने कुराको बिश्लेषण पार्टीले गर्ने हो । भिडेर टिकट प्राप्त गर्ने कामले राजनैतिक तथा प्रशासनिक कार्य सम्पादनका लागि बाधक हुनपनि सक्छ ।
विप्लव नेतृत्वको नेकपासँग तपाईंको विचार नमिलेको हो कि व्यवहार ?
यि दुबै कुरा होइनन् । राजनैतिक कार्यदिशा निर्माण, संप्रेषण र कार्यान्वयनमा लैजाने जस्तो बिशिष्ट बिषय मेरो हकमा निक्कैनै सोचनीय लाग्यो । अर्को तिर स्वÞास्थ्यमा पनि समस्या बढ्यो । त्यसैले त्यो पार्टीको पार्टीगत जिम्मेवारी जीवनबाट अबकास लिएको हुँ ।
टिकट पाउनु भयो भने धरानमा के के गर्न सकिन्छ ?
जनप्रतिनीधिको हैसियतबाट धरानमा संयोजन गर्ने हो भने संमृध्दितर्फ उन्मुख बिकासका बिबिध योजना निर्माण र कार्यान्वयनलाई अगाडि बढाउन सकिने प्रशस्त आधारहरु छन् । सबैभन्दा पहिले नगरको वृहत्तर दीर्घकालीन विकासकोलागि गुरु योजना निर्माण गर्नु पर्छ । खाली योजना जाँदा दैनिक प्रशासनिक काम त गर्न सकिएला तर अन्य काम हुन सक्तैन । नगरवासीलाई फेरिपनि निरास बनाउनु हुन्न । जुन जोगी आएपनि कानै चिरेका उखानलाई चरितार्थ गर्न पटकपटक जानुको अर्थ छैन ।
जनप्रतिनिधि भनेको चंगा हो तर लट्टाई जनताको हातमा हुनु पर्छ । तब मात्र जनताले इच्छाएको काम जनप्रतिनिधिले सम्पादन गर्छ । स्थानीय तह स्थानीय सरकार हो । यो बहुदलकालीन स्थानीय निकाय जस्तो होइन । नगरवासीले सार्वभौम अधिकार उपयोग गर्न सक्छन । नयाँ संविधानले स्थानीय तहको अधिकार संविधानको अनुसूचीमै व्यवस्थित गरेको छ । ती अधिकारको सम्पादन गरियो भने विकासका आधार तैयार हुन्छन । सिमित नै सही अहिलेको स्थानीय तहमा विधायकी, न्यायिक र कार्यपालिकाको अधिकार व्यवस्थित छ । यी अधिकारको उपयोगले बाटो प्रशस्त गर्छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रति जनस्तरमा कस्तो धारणा रहेको पाउनु भयो ?
कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकार प्रति जन अपेक्षा निक्कैनै भिन्न ढंगबाट थियो । अपेक्षा जस्तो अनुभूति नै गर्न पाईएन भन्ने असन्तुष्ट ब्यक्त भएको पाईन्छ । यस्तो अभिव्यक्ति स्वभाविक पनि हो । जनइच्छा जनचाहनालाई सम्बोधन गर्नु नै जनपक्षीय काम सम्पन्न गर्नु हो । समयबद्ध साप्ताहिकबाट
विश्व स्वास्थ्य संगठनको विशेष टोलीमा सामेल भइ अमेरिका फर्केका डा. ब्रुस अलवार्डले...
देशमा संघीय जनगणतन्त्रको स्थापना गर्न आफ्नो पार्टीले तेस्रो जनआन्दोलनको नेतृत्व...
विश्वकै सर्वाधिक ठूलो चुनावको रूपमा मानिएको भारतको लोकसभाको निर्वाचनमा मतदाताहरूले...